Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 1t l0213 zom
Zoma 11 Jan 2013
Na dia tsy milaza izany amin'ny fomba mazava tsara aza ny Soratra Masina, dia mañana antony ara-Baiboly tsara isika inoana fa nisy ela be talohan'ny niandohan'ny aina teto an-tany izao tontolo rehetra izao. Voalohany, milaza Andriamanitra ao amin'ny Joba 38:4-7 fa nisy zava-manana aina nihoby rehefa namorona izao tontolo izao Andriamanitra. Izany dia midika fa efa nisy zava-manana aina niaina teo amin'izao tontolo rehetra izao talohan'ny namoronana ny tany. Mety ho io antokon'ny zava-manana aina io ihany no
tondroin'ny fanambarana ao amin'ny 1 Kor. 4:9 hoe "izao rehetra izao" mitazana. Faharoa, efa tao amin'ny saha Edena ilay menarana talohan'ny nanotan'i Adama sy i Eva. Voalaza ao amin'ny Apok. 12:9 hoe tsy iza ilay menarana fa i Satana, izay nazera avy tany an-danitra. Nilaza i Jesosy fa nahita ny nitrangan'izany (Lio. 10:18). Ny Ezek. 28:14,15 dia milazalaza ny amin'ilay kerobima manaloka, izay tsy nanan-tsiny tamin'ny voalohany kanefa nikomy nony farany. Midika izany fa nisy ny vanim-potoana talohan'ny nikomian'i Satana, ary inoana marimarina fa niaina teo amin'izao tontolo rehetra izao koa i Satana. Ireo toko sy andininy ireo áry izany dia mampiseho fa tsy i Adama sy i Eva no zava-manana aina noforonina voalohany.
"Feno hatsaran-tarehy ny tany rehetra raha vao nivoaka avy teo am-pelatanan'ny Mpamorona azy. Havoana sy tendrombohitra, renirano sy farihy mahafinaritra no hita ombieny ombieny. Tsy toy ny tendrombohitra sy ny havoana mikitoantoana, milingilingy, feno hady sy hantsan-dalina toy ny fahita ankehitriny anefa ny tendrombohitra sy ny havoana fahizay, fa nivalombalona sy nirindra nahafinaritra. Tany lonaka rakotra ahi-maitso mavana no nanarona ny vohon'ny tany rehetra. Tsy nisy heniheny na efitra karankaina, fa zava-maniry tsara tarehy sy voninkazo tsara soratra no tazan'ny maso hatraiza hatraiza. Hazo mijoalajoala sy makadiry izay tsy hita intsony ankehitriny ny haavony, no nandrakotra ny havoana sy ny tendrombohitra; rivotra madio sy mamelombelon'aina no nitsoka moramora nameno ny habakabaka. Ny endrik'izany rehetra izany, raha natao indray mijery, dia manoatra lavitra noho izay sahan'ny mpanjaka kanto sy mahafinaritra indrindra mety ho hita ankehitriny. Tsy afaka ny tsy hidera an'Andriamanitra noho ny asany mahagaga sy mahatalanjona ny anjely raha mitazana izany rehetra izany."- PM, t.23.
Aoka ianao hijery ary hamantatra zavatra manokana, maro araka izay azonao atao, mampiseho fa nisy namolavola ity izao tontolo izao ity.
Inona avy ireo antony azonao omena hanehoana fa tsy afaka mifanaraka amin'ny fampianaran'ny Baiboly momba ny famoronana ny tsangan-kevitra momba ny fivoarana miandalana.
Tsy isalasalana fa misy lafin-javatra tsy haintsika hazavaina ao amin'ny tantaran'ny famoronana ao amin'ny Genesisy. Nahoana anefa izany no tsy tokony ho antony handavana ny maha-fitantarana ara-bakiteny ny fomba namoronan'Andriamanitra ity izao tontolo izao misy antsika ity?